Ingqungquthela yakho elandelayo kwi-Intanethi? | Martech Zone
NgoMvulo, Aprili 26, 2010 NgoLwesithathu, Novemba 5, 2014 Douglas Karr
Ezinye zeenkampani endisebenza nazo, ngakumbi ishishini kwishishini (B2B) zibona iziphumo ezintle kwaye zibuyele kutyalo-mali ngokusetyenziswa kweziganeko ezibonakalayo kunye neentengiso. Kudala ndifuna ukuthumela malunga nokuthengisa umcimbi okwenyani kangangexesha elithile, kwaye kutshanje ndiza kuthetha Ukungafanelekanga, owona msitho ukhokelayo, ubunyani bezentengiso kunye nokunikezelwa kwemisebenzi kwi-Intanethi kwi-intanethi.
Ukungabikho kokusesikweni kunika isoftware iyonke njengeqonga leNkonzo, kubandakanya isoftware yenkomfa, isoftware yokusasaza iwebhu, ingxoxo ekwi-intanethi, ukuqokelela kunye nezixhobo zokunika ingxelo. Ngokungafaniyo nenkomfa yemveli apho kunzima ukulandela abo bazimase, inkomfa ebonakalayo ikuvumela ukuba ulandele yonke into! Ukongeza kwiindleko ngokunciphisa ukukhokelela, iinkampani ezininzi zamkela iinkomfa ezibonakalayo ukuba zinoxanduva lokusingqongileyo.
Kuvavanyo ekuqaleni kwalo nyaka, Ukungabikho kokusesikweni kufumene iipesenti ezingama-48 zabathengisi abaceba ukwanda Ukusetyenziswa kwabo kweziganeko ezibonakalayo kulo nyaka uzayo. Ezona zizathu zidumileyo zokwamkelwa kweziganeko ezibonakalayo zezi yandisa ukufikelela kwintengiso (Iipesenti ezingama-32) kunye yonyusa ivolumu yokukhokela (Ipesenti ezili-15).
Imithombo yeendaba yaseMelika uxele ukuba i-75% yabenzi bezigqibo kwishishini elithe lavavanywa bathi baye kwimisitho emithathu okanye nangaphezulu esekwe kwiWebhu kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo. Ukuthengisa uSherpa uxele ukuba iintlanganiso zibonakalisile nge-37% njengomthombo wolwazi kwisiqingatha sokuqala sika-2009. Uhlahlo-lwabiwo mali lokuhamba olomeleleyo, uqhushumbo lwenethiwekhi yoluntu kunye nokukhangelwa kwezixhobo ezitsha zokukhokela kudityanisiwe ukukhuthaza ukukhula ngokukhawuleza.
I-Ariba yenye ye-Unisfair's mabali a mpu melelo. I-Ariba yinkampani yolawulo lwehlabathi eyaqonda ukuba uqoqosho lwaluza kuba nefuthe kubantu abaya kwinkomfa yabo elandelayo. Besebenzisa iqonga le-Unisfair, bayisusa inkomfa yabo kwi-intanethi kwaye baxhamla kakhulu, kukhokelela kubabhalisi abangama-2,900, abayi-1,618, ii-4,000 ezikhutshelweyo, ukutyelelwa kwamadokodo angama-5,200 538, izingxoxo ezingama-1,078 eziqalisiweyo kunye nemiyalezo eli-XNUMX! Kukuzibandakanya okuhle!
Iingcebiso ezi-3 zoThengiso lweMisitho eyiyo
UJoerg Rathenberg, umlawuli omkhulu wentengiso ye-Unisfair, unikezele ngezi ngcebiso zilandelayo kwintengiso yomnyhadala:
Phambi komsitho: Qala ukulungiselela kwangethuba, njengawe kwinkomfa yomzimba okanye umsitho. Qinisekisa ukuba unesicwangciso sokuvelisa abaphulaphuli. Yenza uyilo kwaye uzame ukwenza amava abandakanyeke kangangoko. Umzekelo, thumela iiphakheji zomnyhadala kunye nezinto zenkomfa umz. Izikipa kubabhalisi ukuba ubiza umcimbi. Ukubonelela ngamagwegwe kunxibelelwano lwasentlalweni oluvumela ababhalisi ukuba babelane ngesimemo noluntu lwabo. Qiniseka ukuba ubandakanya umxholo onomdla kunye nezithethi ezinokuzoba isihlwele. Umxholo olungileyo sisitshixo kumnyhadala ophumeleleyo! Qinisekisa ukuba ababhalisi banexesha lokuqalisa kwiikhalenda zabo.
Ngexesha lomsitho: Chunk iiseshoni zakho zibe ngamaqhekeza amancinci- ngexesha leziganeko ezibonakalayo, abantu abanalo ixesha elifanayo lokujonga njengabantu abazimeleyo. Sifumene ukuba i-20 min yeyona ubude ibhetele. Qiniseka ukuba izithethi zakho ziyafumaneka kwiingxoxo kwigumbi lokuphumla lenethiwekhi. Nika ithuba elininzi lokunxibelelana, uthungelwano kunye nokunxibelelana. Ukuphakamisa iipoll kunye nokudityaniswa kwemithombo yeendaba kwezentlalo ukwenza i-buzz kunye nokuthatha iqondo lobushushu kumnyhadala wakho. Iingxelo zexesha lokwenyani ziya kukuxelela okwenzekayo. Sebenzisa imiyalezo ukuqhuba abantu baye apho isenzo sikhona. Nika inkuthazo kwabo bazimaseyo ukuba bazibandakanye, ezinje ngemincintiswano okanye imizobo.
Emva komsitho: Iminyhadala ebonakalayo ikhula ngokukhawuleza ibe ngamaqonga okuzibandakanya. Yonke imixholo yakho, kubandakanya ne-Q & A, kufuneka ifumaneke kwangoko kwimfuno emva nje kokuba icandelo eliphilayo liphelile. Ngokwesiqhelo malunga ne-50% yababhalisi babonisa bukhoma. Qiniseka ukuba ufumana enye i-50% ukuya nazo-nje kamva. Izixhobo zokuphakamisa ezinje nge-Unisfair's Engagement Index ukubeka inqanaba labaphulaphuli ngokusekwe kubalo lwabantu, imisebenzi kunye nomdla kwaye unike olu lwazi kwiqela lakho ukuze lilandelwe. Iminyhadala ebonakalayo inesibonelelo sokuba uya kuyazi yonke into ayenzileyo umntu obekhona ngexesha wayekuyo. Nika yonke le ngcaciso ityebileyo kwiqela lakho lokuthengisa ukuze uqiniseke ukuba bayaqhubeka nencoko.
Abanye abadlali emarikeni InXpo, ON24, Ukucaciswa2, Indawo yesiBini kwaye 6Connex. Andikakulungeli ukunikezela ngeziganeko ezibonakalayo okwangoku- Ndifumana ixabiso elininzi kunxibelelwano nabanye abantu. Kuba iindleko zenkomfa zingaqala kwi- $ 50k, nangona kunjalo, inkomfa ebonakalayo inyanzelekile. Uya kutsala abantu abaninzi abanethemba elikhulu kodwa baphephe iindleko okanye ukuphazamiseka kohambo.
tags: UCwangciso loMsithoiziganekonkomfa kwi intanethiengenabulungisa